Fannaanka Mareykan ee TI ayaa sannad walba maamula bikradda gabadhiisa Deyjah! - KU SAMEEYSAA
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE Atooraha Amerikanka ah ee TI ayaa maamusha bikradda gabadhiisa Deyjah sannad kasta!
Fannaanka Mareykan ee TI ayaa sannad walba maamula bikradda gabadhiisa Deyjah!
Fannaanka TI, oo loo yaqaanay iskaashi uu la yeesho Rihanna iyo Justin Timberlake, ayaa ku sharraxay barta muuqaalka ah ee uu hubiyay in sannadkasta bikradda gabadhiisa ay tahay sannadihii 18. Jawaab-celinta xanaaqa badan kama qaadin shabakadaha bulshada.
«Fadeexad, misogynist, dib-u-socodsiin... "Waa ereyadan in L'Obs u qalmo bayaankii dhawaa ee rapper TI Wareysiga lagu soo qaaday" boostada "Mudanayaal annaga nala mid ahAakhirkii wuxuu daaha ka qaaday inuu u baahan jiray gabadhiisa Deyjah Harris sanadkasta inay ka hesho "shahaadada bikradda" dhaqtarka dumarka. Sidee? Iyada oo la hubinayo in uu jirkiisu yahay "is-ilaalin". Sanadihii Mareykanka ee 39 wuxuu sii waday kalsoonida isaga oo ku dhawaaqaya inuu aado xafiiska caafimaadka tan iyo lix iyo tobnaad dhalashada gabadha (hadda waa da 'da' 18 sano, Ed).
In kasta oo tiirarka isweydaarsiga la dhejiyay Talaadada Noofembar 5, waxay umuuqataa in laga saaray ilaa iyo. Si kastaba ha noqotee, boggaga ayaa ku baahiya shabakadaha kala duwan ee bulshada halkaas oo ay ku kiciyaan xanaaq xoog leh. Isla markiiba, shaqsiyaadka warbaahinta ayaa dhaleeceeyay hab dhaqanka sanadihii 39 ee Mareykanka. Waxaa ka mid ah: Jennifer Gunter, dhakhtarka dumarka iyo qoraa buugaagta ugu iibinta wanaagsan ee caafimaadka dumarka. "Baadhitaannada unugyada maydku ma ahan caafimaad, ayay ku soo jawaabtay Twitter. Waxay taageeraan hoggaamiye-nimo abtirsiinimo. "
Hymenku micnaheedu waa waxba ma ahan iyo in baaritaanka unugga hymen lama huraan yahay. Iyo taageer trope patriarchal-karaahi ah oo karaahiyo ah. 11 / 12 pic.twitter.com/D1EjoqZeiB
- Jennifer Gunter (@DrJenGunter) November 6, 2019
Muddo dheer, uurkulaha waxaa loo haystay inuu dammaanad qaadayo bikradnimada gabadha. Si qalad ah. Dhakhaatiirtu waxay hadda cadeeyeen in xuubkani aanu calaamad aad u aamin ah u ahayn galmada. Waxay ku taal meel u dhow albaabka siilka, runtii siyaabo badan ayaa loo dhaawici karaa, adigoo ku tababbaaranaya nashaadyo isboorti qaar tusaale ahaan. In kasta oo laga warqabo macluumaadkan, TI - oo magaciisa dhabta ah uu yahay Clifford Harris - uma muuqato inuu arrintan tixgelin buuxda ku yeelan doono. Dhakhaatiirta hortooda, farshaxanku wuxuu leeyahay jawaab muuqaal ah oo muuqaal ah:Dhakhtar dhageyso, fuushan faras, baaskiil ma wado, jimicsi ma sameeyo. Kaliya hubso heesaha, fadlan, oo waxaad i siisaa natiijooyinka sida ugu dhaqsaha badanWuxuu yidhi, sida Buzzfeed News farta ku fiiqday.
Marka la eego muujinta noocaas ah, TI waxay soo jiidatay dareenka dadka isticmaala internetka. Dhamaan waxay xukumaan habdhaqanka gabi ahaanba dib udhaca ee rapper ma aysan ka labalabeyn in ay uqalmaan sidii "argagax iyo hanti badan." "Weydiista dhakhtar inuu hubiyo haddii gabadhaada ay galmo sameysay waa sharafdarro iyo waalli. Hadana, xitaa kuma caddeyn kartid heesaha. Hymenku wuu kala dillaaci karaa markii aad isku dhaawacdo kursi baaskiilHaweeney da 'yar ayaa ku soo qortay barteeda Twitterka. Dhinaceeda, isticmaale kale ayaa ku guuldareystay inuu barbar dhigo barbardhiga dystopia ee ay qortay Margaret Atwood: The Scarlet Maid. Sida laga soo xigtay Buzzfeed News, danta ugu weyn ee Deyjah Harris waxay jeceshahay dhowr tweet oo dhalleeceeyay qaabka aabaheeda.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore http://www.culturebene.com/55892-le-rappeur-americain-t-i-controle-annuellement-la-virginite-de-sa-fille-deyjah.html
Meghan Markle iyo Prince Harry waxay daabacaan cusbooneysiin xanuun leh si ay ugu diraan barta Instagram xiisadda